Ikati lezemidlalo lase-Arabian Mau | Amakati kaNoti
Ikati lohlobo Isi-Arab mau Kuyinto enhle enoboya bomdabu yase-Arabia okuthi, yize kungakaziwa okwamanje, kancane kancane yenza isifaca emizini yabantu abayimilutha yamakati baseNtshonalanga.
Ukubukeka okusobala, lo msikazi othandekayo uthanda ukugijima nokudlala, kodwa futhi uzokujabulela ukuba yisikhungo sokunakwa komuntu omthandayo.
1 Umsuka nomlando we-Mau wase-Arabia
4 Ukunakekela i-Mau yase-Arabia
4.5 Ukuthandana nenkampani
5 Iyini intengo ye-Mau yase-Arabia?
6 Izithombe zekati lase-Arabia Mau
Umsuka nomlando we-Mau wase-Arabia
I-Arab Mau Luhlobo lwekati elivele ngokuzenzekelayo eMiddle East, lapho ahlala khona yedwa kwaze kwaba yilapho abantu beba baningi ngokwengeziwe. Lapho lokho kwenzeka, u-feline wabona ukuthi angaba nokudla kwamahhala endaweni lapho izimo zokuphila zingezinhle kakhulu, kanye nenkampani.
Kancane kancane, ibilahlekelwa ezinye izici zokhokho bayo ngenxa yokuwela nezinye izinhlobo zamakati alethwe evela kwezinye izingxenye zomhlaba. Kodwa-ke, ayizange yaziwe kuze kube ngu-2004, lapho umfuyi uPeter Mueller eqala ukukhetha amazinyane. Ngemuva kweminyaka engu-4, uhlobo luthathwe yi-World Cat Federation (WCF).
Leli yikati eline- umzimba oqinile, wemisipha nowezemidlalo onesisindo esiphakathi kuka-4 no-6kg. Ikhanda liyindilinga, linesilevu esivele kahle nezindlebe ezinkulu, ezingunxantathu, lisuswe kancane. Imilenze iqinile, yenziwa ukuthi ikwazi ukuhamba amabanga amade.
Ijazi libushelelezi, futhi lingaba nsundu, libe mpunga futhi libe namabala.. Okumnyama nokumhlophe kwamukelwa kuphela uma kungekho mabala. Inesikhathi sokuphila seminyaka eyi-14.
U-Arabia Mau uthanda ukuzivocavoca umzimba. Kuyisilwane ukuthi, noma sikwazi ukuzivumelanisa nokuhlala eflethini, uzohlala kangcono endlini ene-patio noma ingadi lapho ungazizwa khona amaphunga ahlukile futhi ube nezisusa ezahlukahlukene ifulethi ebingeke libe nalo. Yini enye, uhlakaniphile futhi angaba nenkani kancane, ngakho-ke angafundiswa amaqhinga uma kusetshenziswa amakati ekati ukumjabulisa.
Uma ehlangene njengomdlwane, kuzoba lula kakhulu ukuthi azwane nezinja namanye amakati.
Ukunakekela i-Mau yase-Arabia
Gwema ukubapha okusanhlamvu. Lokhu, ukungakwazi ukugaywa kahle yikati, kungadala izinkinga ezifana ne-allergies. Ngakho-ke uma sikugcina lokhu engqondweni, okulungile kungaba ukunikeza ukudla okungenakho okusanhlamvu, noma-okusanhlamvu, futhi lokho kunothe ngamaphrotheni ezilwane.
Kodwa-ke, uma unethuba lokufuna iseluleko kudokotela wezokudla oqonda ukudla okungokwemvelo kwama-felines, unganqikazi ukumnika iBarf. Umzimba wakho uzokubonga ngakho.
Ukuze inhlanzeko yekati ilunge kubalulekile ukwenza izinto eziningana: xubha izinwele zakhe nsuku zonke, hlanza amehlo nezindlebe uma kunesidingo ngemikhiqizo ethile, futhi ugcine nebhokisi lakhe lodoti lihlanzekile okuzosuswa ngalo isitulo nomchamo kanye noma ngaphezulu ngosuku, kuthi ithreyi ihlanzwe kahle ngamanzi nomshini wokuwasha izitsha.
Ngokunjalo futhi zama ukubeka i-feeder nesiphuzi kude ngangokunokwenzeka ebhokisini lakho lodoti, ngesizathu esilula: awuthandi ukudla ngenkathi unuka indle yakho. Ngalo mqondo, okuhle kokubili ukudla namanzi kusegumbini elihlukile kulelo le-WC yakho ethile.
Uhlobo lwe-Arabian Mau aluthambekele ezifweni ezibucayi, ngaphandle kwalezo ezingaba nanoma iyiphi enye i-feline. Kepha sikhuluma ngesidalwa esiphilayo, ngakho empilweni yakho yonke ungagulaNgakho-ke, ukuvakashela udokotela wezilwane njalo kubalulekile. Kuzofanele futhi uye kuye uyomgoma lapho kunesidingo, bese umthena uma ungahlosile ukumzala.
Udinga ukuzivocavoca umzimba nsuku zonkeNgakho-ke, kubalulekile ukuthi unikele ngesikhathi esiningi ngangokunokwenzeka ukuze udlale naye futhi ukuze akwazi ukushisa amandla akhe.
Nikeza uthando nsuku zonke, kodwa yebo, ngaphandle kokumcindezela noma ukumcindezela. Thatha isikhathi esincane usuku ngalunye ukuqonda ulimi lwabo lomzimba. Lokhu kuzokwenza ubuhlobo bakho bube ngcono kakhulu. Futhi, zama ukumnikeza amathini okudla okumanzi noma ukuphatha ikati ngezikhathi ezithile ukuze umjabulise kancane.
Futhi, kufanele umgcine enkampanini, uzame ukumenza aphile njengomndeni.
Iyini intengo ye-Mau yase-Arabia?
Ngabe ufuna izintengo zekati le-Arabian Mau? Uma impendulo yakho inguyebo, kufanele wazi ukuthi imayelana I-600 euro uma itholakala endaweni yokuzingela. Uma kwenzeka ufuna ukuyithenga esitolo sezilwane, kuzokubiza kancane, cishe ngama-300-400 euros.
Kepha khumbula ukuthi ikati kufanele okungenani libe nezinyanga ezimbili ubudala, ngoba ngaleyo ndlela lizolunyulwa futhi liyobe selivele liqale ukudla ukudla okuqinile.
Izithombe zekati lase-Arabia Mau
Ikati lase-Arabia Mau linokubukeka okungajwayelekile okuzokwenza uthandane zisuka nje. Ngalesi sizathu, besifuna ukunamathisela ezinye izithombe ukuze uzibheke:
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ikati lezemidlalo lase-Arabian Mau
Sawubona, Ngiyabonga ngale ndatshana!
Sinekati laseMau Arabe elamukelwa eDubai elibuye nathi eSpain. Incazelo ekulesi sihloko igcwaliseka cishe kuyo yonke incwadi.
Ngokusobala kunesisho esifingqa umlingiswa wala makati: "uma ungakwazi ukuthola inja, thola iMau." Uma ungenayo inja, yamukela iMau.
Singathanda ukuhlangana nabanye abanikazi beMau (isi-Arabhu, isiGibhithe) eSpain
Halala ngekati k
Hlangana nekati elinothando uNeva Masquerade